Top 10 Talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan BSR taariikhqorihii screen
Waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in in Talooyin iyo tabaha la xiriira barnaamij yihiin sahamiyey ka hor intaan la soo bixi oo iyaga ka caawin doono si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka aan la isticmaalo oo kaliya laakiin barnaamijka isticmaalka laftiisa uu noqonayaa fudud iyo gobolka of farshaxanka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in taariikhqorihii screen BSR iyo talooyin la xiriira iyo tabaha la raacay si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in qaab iyo sida looga baahan yahay sameeyo.
Top 10 Talooyin ku saabsan BSR taariikhqorihii screen
Ka dib waa talooyin in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira:
1. Lacag u file ah
User waa in la hubiyo in meesha uu file waxaa si gaar ah waxaa jira fursado badan oo kac mar duubay ayaa la sameeyey sameeyo. Waxa kale oo hubin doona in meesha ugu wanaagsan ee sida baahida iyo rabitaanka user la cayimay si user ah ka heli kartaa ugu wanaagsan ee reer barnaamijka iyo haddii file waa in la helay ka dibna user Khasab ma aha in la raadiyo waqtiga oo mar kale si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo. Sidaas daraaddeed Meesha waa in la cayimay oo aan wax arrintan iyo dhibaato sida barnaamijka sidoo kale u ogolaataa isku mid.
2. Baadhitaanka fursadaha
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in qaab ay ku duubo waa in la badbaadiyey waxaa loo cayimay in la helo natiijada ugu wanaagsan iyo sidoo kale in la hubiyo in qaab la doonayay by user wax walba waa in ay taageeraan hawlaha. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in qaabka uu soo cayimay waa mid caadi ah iyo waxaa sidoo kale ay taageerayaan qalabka on ciyaaryahanka uu u shaqaynayo si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican sameeyaan.
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in goobaha ay ku haboon yahay iyo wixii kaloo la sameeyo qaab iyo fasalka. Goobaha ay la xiriiraan ah dhinacyada kala duwan ee taariikhqorihii ahaa, sidaas darteed waxaa muhiim ah in iyaga reserved si loo hubiyo in ugu fiican iyo stat ee hawlaha farshaxanka waxaa ku riyaaqay ilaa xad la xeeladda ku qoray user. Sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee ay tahay in la riyaaqay arrintan la xiriira mar goobaha ay si sax ah loo qaybiyay.
4. Full doorasho screen
Doorashada buuxa screen sidoo kale in karti loo karo si loo hubiyo in wax lagu qoro ee aan la soo dhibtay oo ka functionalities kale sida kale ee loo arko karaa sida nooc ka mid ah xusuusin ah si loo hubiyo in lagu duubo waa in horumarka iyo arrimaha guud ee aan wax laga qaban ilaa duubay aan la dhameystirin. Waa shaqada ugu fiican in uu Ben gundhig ciyaaryahanka gudaha iyo waxaa sidoo kale si weyn loo isticmaalo.
Waa shaqada ugu fiican taas oo ka dhigaysa BSR taariikhqorihii screen mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee jeer oo dhan. User waa in la hubiyo in qaybta tafatir ah waxaa loo isticmaalaa habka ugu wanaagsan iyo fursadaha la heli karo waxaa u yihiin sahamiyey hab ugu fiican si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay in lagu gundhig gudahood ka dhigi. Inta badan dadka isticmaala ay sidoo kale ka warqabin xaqiiqada ah in taariikhqorihii BSR wuxuu la iman doonaa qalab tafatirka.
6. maamulka qalab Dibadda
User waa in sidoo kale baadhaan qaybaha suuqa kala maamulka qalabka dibadda in kor u soo booda marka barnaamijka la bilaabay. Waxay hubisaa in ka dhigi doonaa in ugu fiican iyo gobolka feature tahay la doortay iyo files waxaa soo gaaray ka qalab si toos ah si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo ay jirto baahi ma barnaamijka kale in lagu xiro:
Qaybta taariikhqorihii 7. Screen
Qaybta taariikhqorihii screen ayaa sidoo kale waxaa laga arki karaa in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka in ay gundhig gudahood barnaamijka ka. Habka ugu daah waa in la qabtay ayaa lagu xusay gudahood qaybtan oo sidaas daraaddeed user waa in la hubiyo in waxa la sahamiyey si buuxda si aad u hesho wixii kaloo loogu sameeyo hab sax ah sameeyo.
8. qaybta taariikhqorihii
Qaybta taariikhqorihii barnaamijka waxaa lagu baari karaa si loo hubiyo in qaybta audio ee barnaamijka waxa lagu sahamiyey sifooyinka wanaagsan iyo user helo shaqada ugu wanaagsan ee lagu sameeyey qaab iyo fasalka. Duubo Audio waa arin oo user waa in la hubiyo in arrinta la aqoon saday iyadoo la kaashanayo qaybta in ka yar yahay wada hadal la sameeyo.
9. duubo cabbir Multi
Sidoo kale waa mid ka mid ah hawlaha ay ka dhigaya taariikhqorihii BSR sida mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada software tahay in arrintan la xiriira. Waxay ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo duubo guud ee barnaamijka waxaa loo sameeyaa hab ugu fiican. Habkaani sidoo kale u ogolaataa user si loo hubiyo in lagu qoro in la sameeyo waxaa loo arki karaa weaxynnu kala duwan oo ayna duleella u ah waxaa lagu ogaan karaa.
10. fursadaha Main
User waxay u baahan tahay si ay u hubiyaan in fursadaha ugu muhiimsan ee barnaamijka ayaa sidoo kale sahmin iyo natiijada ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u diiwaan video. Waxa kale oo ay kaa caawin lahaa user si loo hubiyo in duubo video lagu sameeyo fudayd iyo qanacsanaanta iyo fasalka
Wondershare Video Convertor Ultimate waa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka ah in loo isticmaali karaa sida duwan oo taariikhqorihii screen BSR ah oo dhan waxaa sabab u ah xaqiiqada ah in hawlaha soo socda ayaa gundhig gudahooda:
Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa badan 150+ qaabab taas oo ka dhigaysa mid aad u faa'iido badan oo user inay hubiyaan in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helay ka dhigi kara.
User ayaa sidoo kale hubin karaa in in taariikhqorihii video ah oo aan gooni gooni ah ku rakiban sida rakibaadda ugu muhiimsan ee barnaamijka ayaa sidoo kale waxa ay ku rakibtay.
Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa oo dhan farsamooyinka ugu dambeeya ay ka mid yihiin HD iyo 4K taas oo barnaamijka ugu horumarsan ee jeer oo dhan ka dhigaysa.
User ayaa sidoo kale hubin karaa in in version maxkamadda waxaa loo isticmaalaa ka hor go'aanka kama dambaysta ah ee wax iibsiga ee la sameeyo.
Interface ayaa sidoo kale isticmaalka ee barnaamijka waa u fududahay iyo waxa aad u user saaxiibtinimo. Jidka si taariikhqorihii video waa menu> video taariikhqorihii.
Sida loo Download Pandora playlist
Sida loo Download CBS News la One Click
Download hoosaad u Movies DVD iyo TV muujinaysaa
> Resource > Video > Top 10 Talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan BSR taariikhqorihii screen